Amathuluzi Okuqala Okungeniswa Kwezokwelapha Avunyelwe Ukubhalisa eShanghai Of China
Amathuluzi Okuqala Okungeniswa Kwezokwelapha Avunyelwe Ukubhalisa eShanghai Of China Xinmin Evening News (Intatheli uQiu Yingqiong) Muva nje, uWei Kai, umphathi olawula ukubhaliswa kwePhilips Ultrasound (Shanghai) Co., Ltd., uthole "isitifiketi sokubhaliswa kwedivayisi yezokwelapha" e th ...Funda kabanzi »
Umehluko phakathi kwesikele se-Tissue kanye ne-Suturing Scissors Umehluko phakathi kwesikele sezicubu kanye nezikele zokuthunga njengokulandelayo: 1. isikele sezicubu sisetshenziselwa ukusika izicubu zomuntu, kanye nesikele ...Funda kabanzi »
Kuthiwani Ngezinsimbi Zokuhlinza Ngezicubu?
Kuthiwani Ngezinsimbi Zokuhlinza Ngezicubu? Izinsimbi zeMicrosurgical zibhekisa kumathuluzi amahle akhethekile afanele odokotela ukwenza ukuhlinzwa okuningiliziwe, ukwehlukaniswa, kanye nokususwa kanye nokulungiswa kwezicubu ngaphansi kwesibonakhulu. Izinsimbi zomshini zokuhlinza ezijwayele ukusetshenziswa yilezi: 1. Ama-microsurgery forceps yiwona ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Mar-13-2021
Imvamisa idivaysi yezokwelapha ifaka izinsimbi zokuhlinza nezinto zokusebenza, njengezikere, i-forceps, iziphathi zenaliti, izingwegwe, ect. Umsebenzi ohlobene nokwethiwa kwamagama wemikhiqizo yezokwelapha unomlando omude. Kusukela ...Funda kabanzi »
Kufaka ini ukuhlolwa okujwayelekile kwamehlo? Ukuhlolwa okuvamile kwe-ophthalmology kufaka: ukuhlolwa kwe-ophthalmoscope ye-fundus, ukuhlolwa kwengcindezi ye-intraocular yengcindezi ye-intraocular, isimo se-vitreous, noma ngabe kukhona ukopha ku-retina, i-corneal confocal microscope examinati ...Funda kabanzi »